Horumarka Tiknolojiyadda Casriga ah ee Jabuuti - BBC News Somali
Horumarka Tiknolojiyadda Casriga ah ee Jabuuti
Dalka Jabuuti, warbaahinta kaliya ee si toos ah uga howlgashaa waa RTD, raadiyaha iyo telefishinka dalka Djibouti iyo wargayska afka dowladda ku hadla ee La Nation (LA Nasyoon), hadana waxaa uu aad ugu horreeyaa dhinaca teknolojiyadda isgaarsiinta.
Waxaa uu dalku maalgalin xoog leh ku sameeyay teknolojiyadda casriga ah, iyadoo lagu tilmaami karo mid ka mid ah dalalka ugu horreeya dhinaca internet-ka vibre optic-ga ee fiilooyinka badda hoos mara ee kordhiya xowliga internetka.
Sidaas oo ay tahay ayaa mararka qaar eedo dowladda loo soo jeediyaa.
Waxaa kuwaas ka mid ah in dowladdu isticmaalka internetka xayiraado dhowr ah saarto, sida hay'adda lagu magacaabo Freedom House, ee Maraykanku fadhigeedu uu yahay ay sheegtay.
Haddaba, Cabdiraxmaan Koronto oo dhowaan booqasho ku tagay Jabuuti, ayaa la kulmay wasiirka warfaafinta, isgaarsiinta iyo boostada Jabuuti, Cali Xasan Bahdoon, oo uu marka hore waydiiyay in uu ka warbixiyo xaaladda isgaarsiinta dalka.